PC-APP | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label PC-APP. Show all posts
Angry Birds Star Wars HD v1.5.3 APK is Here! [Latest]
Features of Angry Birds Star Wars HD
That’s it. Enjoy! :)
▼ tusfiles ▼ ▼ hugefiles ▼ ▼ sendmyway ▼ ▼ zippyshare ▼
ကဏ္ဍ Game, PC-APP
Android apk တွေ ကို PC ​ပေါ် မှာ Run မယ့်​ BlueStacks App Player
ခုခေတ် မှာတော့ Android Device တော်တော် များများကို လူတွေ သုံးလာ ကြပါပြီ။ အဲလိုပဲ Android Application တွေ ဟာ လည်း လွယ် လွယ် ကူ ကူနဲ့ ရယူ နိုင်ပြီ ဖြစ် ပါတယ် Android မှာ *.apk ( application package ) ဖိုင်တွေ ဟာ installer file တွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
Software & Apps တွေ ကို *.apk နဲ့Software Supplier တွေက ထုတ် လုပ် သလို အဲဒီ apk file တွေ ဟာလည်း Android Platform
Devices တွေ မှာသာ run ပါ တယ်။
ကျွန်တော် တို့က android application - apk တွေ ကို Computer နဲ့ Internet ကနေ download လုပ် ကြရ တာ များပါတယ်။ download လုပ်ပြီး သား file တွေ ကို ကိုယ့် စက် ထဲမှာ အရင် စမ်းပြီး run ချင် တယ်ဗျာ။ test run သုံးကြည့် ပြီး အဆင်ပြေမှ ကိုယ့် ဖုန်း ထဲကို ထည့်မယ်။
ဒါပေမယ့် computer က apk file ကို မ run ဘူး။ နောက် တစ်ခု က တစ်ချို့ Games တွေ ကို resolution ကောင်း ကောင်းနဲ့ ကစား ချင်တယ်။
သိတဲ့ အတိုင်းပဲ Android phone တွေ မှာက screen size က အကြီး ဆုံးမှ ၄ လက်မ သာသာ ဘဲ ရှိတာ မြင်ကွင်း သေးပါတယ်။
tablet pc မော်နီတာ နဲ့ ဆိုရင် မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် နဲ့ ပိုပြီး အဆင်ပြေ ပါတယ် ပြီးတော့ ဂိမ်းတွေ ကိုလည်း screen ကြီးကြီး မှာ ကြည့် ပြီး ကစား
အဲဒါတွေ အားလုံးကို BlueStacks App Player လေးက ကူညီ နိုင် ပါတယ်။ BlueStacks App Player လေးကို လိုချင်ရင် အောက် မှာ ဒေါင်း ယူနိုင် ပါတယ်။
Users Files BlueStacks Home
ပြီးလို့ installation လုပ်မယ် ဆိုရင် တော့ သူ က online နဲ့ ချိတ် ပြီး app store နဲ့ notifiy တွေ ကို install လုပ် ပါမယ်။ အချိန် ကတော့ နည်းနည်း ကြာမှာ ဖြစ်သလို connection ကောင်း ရင်တော့ မြန်ပါ လိမ့်မယ်။ ပြီးရင် တော့ အသုံးပြု လို့ ရပါပြီ။ တကယ်လို့ စမ်းချင်တဲ့ (သို့ မဟုတ်) အသုံး ပြုချင် တဲ့ Application apk တွေက စက်ထဲမှာ ရှိ ပြီးသား ဆိုရင်တော့ အဲဒီ apk ကို double click လုပ် လိုက်တာနဲ့ bluestack ထဲ ကို Auto ထည့် ပေး သွား မှာ ဖြစ်ပြီး Player လေးကို ဖွင့်ပြီး အသုံးပြု နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခု သတိပြု ရမှာ ကတော့.......။
အသုံးပြု မယ့် စက်ရဲ့ hardware ပိုင်း နည်းနည်း မြင့်ဖို့ လို ပါတယ်။ CPU ဆိုရင် Core CPU တွေ ဖြစ်ရမှာ ဖြစ် သလို Memory ဆိုရင် အနည်းဆုံး DDR22GB, (သို့ ) DDR32 GB လောက် တော့ ရှိရမှာပါ နောက် အရေးကြီး တာ တစ်ခု ကတော့ Internet line ကောင်း ရပါမယ် ဒါမှ မဟုတ် ရင် လည်း beta version နဲ့ စမ်း ကြည့် လို့ ရပါ သေးတယ်။ Beta က နည်းနည်း ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ စမ်း ကြည့်လို့ အဆင်ပြေ နိုင်မှာပါ။
beta version ကို လိုချင် ရင်တော့ အောက် မှာ ဒေါင်းနိုင် ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Android, PC-APP, Phone Application, Player
PC Auto Shutdown 5.8 Full VerSion2MB
PC Auto Shutdown 5.8 |2MB
PC Auto Shutdown လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ ကွန်ပျူတာကို အချိန်နဲ့
တိုက်ပြီးပိတ်ချင်သူများအတွက် PC Auto Shutdown ဖူးဘားရှင်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (2MB)ပဲရှိပါတယ် ကွန်ပျူတာကိုအချိန်နဲ့ လိုက်ပြီးပိတ်ချင်သူများအောက်မှာဒေါင်း
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 05, 2014 No comments:
Computer ပေါ်မှာ Andriod App Icon ပေါ်စေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်
မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ Andriod ဖုန်းဆော့ဝဲလ် Icon ကိုမြင်ရစေမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို
အပေါ်ကပုံလေးမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း APK ဖိုင်ရဲ့ Icon အားလုံး ကွန်ပြူတာမှာ မြင်ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
လိုအပ်အသုံးပြုလိုပါက အောက်ကလင့်ခ် ကိုနှိပ်၌ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။
ကဏ္ဍ Android, PC-APP
Android Apps တွေကို မိမိ် ကွန်ပျူ တာမှာ သုံးချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်
အခု software လေးကတော့ Android Apps တွေကို computer မှာသုံးလို့ရတဲ့ software တစ်ခုပါ။
တစ်ခြား software တွေလည်း တင်ပေး ဖူးပါတယ်။
အခု software ကတော့ တစ်မျိုးဆန်းတဲ့software တစ်ခုပါ။
The BlueStacks App player isasoftware created by company Bluestacks using which you can play all your favorite Android apps or Android games on your Windows PC.Also lets you run your Android apps fast and full screen on Windows PCs and tablets.Even Bluestacks beta is converting all the ARM compatible Android apps to run on x86 platform.
Features which you will get in Beta version Bluestacks App Player is listed below
1.Better App Compatibility
3.From Your Android Phone to PC
5.Direct App Store Access
Website [bluestacks ]
တစ်ခြား OS အတွက် Download link [ success ]
direct Download app.box
ကဏ္ဍ Android, PC-APP, Phone Application